Notontosaina tetsy Ambohijanahary Antananarivo misy ny foibe FITATA ny 19 septambra 2020 ny fankalazana ny Taombaovao iraisan'ny Malagasy. Tamin’ny fomba tsotra ny fankalazana. Andiany faha-4 izy ity, ankalazaina isaky ny volana septambra, araka ny tapaka nanomboka ny taona 2017.Any Mahajanga no ivom-pankalazana amin’ny 2021. (Jereo Sary Tohiny)
Betsaka ny mimenomenona fa ratsy ny sary, na tsy mahazo sary rehefa avy orana, indrindra ireo mampiasa Canal+ na hafa. Nanao fanadihadiana, sy fandalinana tsotsotra momba izany isika, ka dia zaraina eto.Lazaina mazava anefa fa tsy mahasolo ireo teknisianina, sady ampy fitaovana sy traikefa ary matihanina momba izany ny resaka atao eto, nefa ho an'ireo izay lavitra na tia kitikitika dia afaka mijery ny fanazavana eto sy izay hita maro eny amin'ny tranokala rehetra eny. 1- Inona ireny sahafa boribory ampiasaina ireny Ireo mpandefa televizionina na radio, dia hanamora ny andraisan'ny rehetra azy, dia akarina ambony be eny anabakabaka ny sary sy feo dia miverina mienjera na midina ety ambany dia miparitaka amin'ny faritra maro. Izay izy raha atao kisarisary tsotra, fa raha ara-tekinika, dia aza adino fa boribory somary manao endrika baolina lavalava ny tany, izy io dia miodina manodidina ny tenany, mahavita miodina indray mandeha manodidina ny tenany izy ao anatin'ny 24ora.
Mivoha ny Fiangonana rehetra ao amin’ny Faritra Menabe manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Manomboka amin’ny 6ora maraina ary mikatona amin’ny 5ora hariva ny fisokafan’ny Fiangonana, ary noferana ny Zoma-Sabotsy ary Alahady ihany ny andro azo anaovana fanompoam-pivavahana. Anisany nivoitra ireo androany nandritra ny fampiantsoana fivoriana nataon’ny CRCO Menabe ireo mpitondra fivavahana androany maraina.
Victoire Rasoamanarivo no Olontsambatra malagasy voalohany. Teraka tamin'ny taona 1848.Natao Batemy ny 1 novambra 1863.Nandray ny Sakramentan'ny Eokaristia ny 17 janoary 1864.Natao Mariazy tamin-dRatsimatahodriaka ny 13 mey 1864.Nandray ny Sakramentan'ny Fankaherezana ny 11 septambra 1864.Nodimandry ny 21 aogositra 1894. Ny papa Joany Paoly II no nanambara azy ho Olontsambatra ny 30 aprily 1989. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 27 juillet 2020 12:09
27 jolay: Fanombohana ny fankalazana ny Isantaonan'ny Fifohazana Tobilehibe Ankaramalaza
Manomboka androany 27 jolay ny fankalazana ny Isantaonan'ny Fifohazana Tobilehibe Ankaramalaza, ary tsy hifarana izany raha tsy amin'ny 2 aogositra 2020. Miova ny fomba fankalazana amin'ity indray mitoraka ity noho ny valanaretina coronavirus eto amin'ny firenena, arahina amin'ny alalan'ny facebook na Youtube na onjampeo ny fandaharam-potoana mikasika izany.
Ny fandaharana Ampitampitao tao amin'ny RNM no tena nahalalan'ny maro an' i Dany Rabemananjara. Mpanakanto ihany koa izy, Mpamorona, mpikabary.70 taona izy izao nodimandry izao. (Jereo Sary Tohiny)
Nodimandry ny Zoma 24 Jolay 2020 tamin’ny 10 ora alina Atoa Andreas Richard, Tonian’ny Tobilehibe Ankaramalaza. Andraikitra lehibe samihafa no efa notanany teo amin'ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy na FLM. Efa Mpitahiry volan’ny FLM izy taloha, Talen’ny SALFA teo aloha efa nisotro ronono ihany koa izy. Efa filohan’ny Filankevi-pitantanan’ny SALAMA. Mpiandry andiany Marina (1981) i Andreas Richard Tsitohafison. Vao avy nanao ny fandaminana momba ny fankalazana ny Isan-taona faha 79 ny Tobilehibe Ankaramalaza tao amin’ny Toby Betesda Ambohibao Antananarivo, tamin’ny alalan’ny Facebook, izy no izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Raha ny heno dia hypoglycémie no nahafaty azy. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 22 juillet 2020 22:14
Artista: Nodimandry teo amin’ny faha-61 taonany i Nono Raberanto
Nindaosin’ny fahafatesana androany i Raberanto Jean Noel na i Nono Raberanto araka ny anarana maha mpanakanto nahafantaran’ny maro azy, tao amin’ny tarika Raberanto. Nolazoin’ny aretin’ny voa izy, ary io no nandavo azy tamin’izao faha-61 taonany izao. Hatao rahampitso alakamisy 23 jolay eny Tanjombato ny fandevenana azy. (Jereo Sary Tohiny)
Firenena isany mitondra faisana amin’ny Covid-19 i Brezila. 78 000 no efa namoy ny ainy noho io valanaretina io, mametraka azy ho firenena faharoa be maty indrindra manerantany aorian’i Etazonia. Eveka Katolika miisa telo izao no matin’ity Covid-19 ity any an-toerana, anisan’izany i Mgr Henrique Soares da Costa, Evekan’i Palmares notendren’i Papa François ny taona 2014, nodimandry teo amin’ny faha 57 taonany.
Tsy nivalona akory ny herinandro nahalasanan'i Ranaivoson Victor Emmanuel Marcel, ny 12 jolay lasa teo, fantatry ny maro, indrindra ny ao amin'ny Vondrombavaka Katolika, Jesoa Be Famindrampo, Saint Luc Befelatanana, amin'ny anarana hoe Manou, dia nodimandry ihany koa ramatoa vadiny, RAVAOSOLO Hélène, ny sabotsy 18 jolay 2020. Raha ny angom-baovao dia maty nijanona ny fony. Heverin'ny maro manodidina azy fa noho ny alahelo be loatra tamin'ny fahalasanam-badiny no nahatonga izao fahafatesany izao. Namela kamboty 5 mianadahy izy mivady lasa any amin'i Jesoa Be Famindrampo izao.